China Cutting Mat ho an'ny Silhouette, 8812, 12 ″ x12 ″ fandriana fanapahana ho an'ny Silhouette comeo Famokarana sy ozinina | Allwin
Tsihy manapaka tena
Kitapo fanapahana ho an'ny Cricut
Kitapo fanapahana Silhouette
Kitapo lavaka taratasy
Kitapo taratasy ara-dalàna
Kitapo mavesatra amin'ny adidy mavesatra
Kitapo taratasy misy lavaka maro
Punch punch plier
Asehoy ny fampahalalana
Kitapo fanapahana Silhouette, 8812, 12 ″ x12 ″ fandriana fanapahana ho an'ny Silhouette cameo
【Fantsam-bokatra ho an'ny Silhouette Cameo】 - fantsom-pandrefesana 12x12 dia sahaza ho an'ny Silhouette comeo 3/2 / 1.Ireo tsihy fanapahana ireo dia misy tsipika fitetezana izay tena manampy ny fizotran'ny fanapahana. Ireo tsihy fanapahana ho an'ny Silhouette Cameo dia hanampy anao hamita tsara kokoa ny famoronana anao.
【Ny haben'ny fanapahana】 - Ireo faritra atsipazo fametahana haben'ny velarantany: 12x12 Inch (305X305mm), ny haben'ny tsimainty fanapahana: 12.99x14Inch (325X345mm) (L * W).
Material Fitaovana avo lenta PVC】 - Ireo MATS ireo dia vita amin'ny akora miloko PVC miloko matevina izay tsy hihena aorian'ny fampiasana miverimberina. Raha ampitahaina amin'ny marika hafa dia henjana sy mateza kokoa izy io.
【Fitehirizana tsihy ting - Ampiasao ny scraper hanesorana ireo sombin-javatra be loatra sy ny spatula hanesorana tsara ireo sary voapaika. Tazomy eo amin'ny tsihy fanapahana ny rakotra sarimihetsika mazava rehefa mitahiry mba tsy ho potika sy vovoka hatrany ny fametahana tsiranoka.
Item Model Model 8812
Vokatry ny vokatra 325x345 mm
Habeny (haben'ny fanontana) 12 x 12 INCH
Mety amin'ny milina Silhouette comeo 3/2/1
Loko mahazatra Mangarahara / manga / maintso / volomparasy / mavo
Color Tongasoa namboarina
Famantarana Ekena ny fanontana ny logo anao
Fotoana santionany Matetika 1 ~ 3 andro fiasana
Sarany ohatra Ny sarany santionany dia hiankina amin'ny sary famantarana ny sarany
Loko mangarahara / StandardGrip
Loko manga / LightGrip
Loko maitso / StandardGrip
Clor volomparasy / StrongGrip
mbola manana loko mavo sy mavokely / voasary
● OEM manankarena sy traikefa famolavolana marika marobe iraisam-pirenena.
● karazana dia orinasa mpamokatra karazana famokarana tanteraka.
● Famokarana avo ny orinasa matihanina mandritra ny 20 taona.
● Kalitao tsara, vidiny lafo, fifaninanana matanjaka eo amin'ny tsena.
● Tombony lehibe indrindra: famokarana mandeha ho azy feno, vidiny ambany.
● Sina sy mpamatsy marika marika iraisam-pirenena fanta-daza.
● Ny vidin'ny OEM dia tokony hifandray aminay, mendrika ny antenaina ny vidiny.
● habe manokana, azo namboarina
Namokatra tsipika fanapahana nandritry ny 15 taona izahay! Mailand sinoa dia mamokatra orinasa famonoana mat.
Kitapo fanapahana namboarina, hatevin'ny fitaovana 0.5mm. Ny fitaovana dia mangarahara PVC. Ny hafanana dia misy karazany roa: ny hafanana avo lenta ary ny fihenan'ny ankapobeny. Manana habe hafa ihany koa isika: 12 "x 24", 12 "X 8", 12 "x 6", 4,5 "x 12", 4,5 "x 6.5" santimetatra.
Previous: Kitapo fanapahana Silhouette, 8812, 12 ″ x12 ″ fandriana fanapahana ho an'ny Silhouette cameo
Manaraka: Kitapo fanapahana Silhouette, 8824, 12 ″ x24 ″ fandriana fanapahana ho an'ny Silhouette cameo
3 sosona A5 manapaka Mat, 883A5, Manasitrana tena Cu ...
Kitapo fanapahana ho an'ny Cricut, 9912, 12 ″ x12R ...
3 sosona A1 manapaka Mat, 883A1, Manasitrana tena Cu ...
Kitapo fanapahana ho an'ny Cricut, 9924, 12 ″ x24R ...
5 sosona A5 manapaka Mat, 661A5, Manasitrana tena Cu ...
ADDRESS: No.9, Xinfeng Road, Youjiu Village, Wanjiang Area, Dongguan City, Provinsi Guangdong, Sina